YEYINTNGE(ကနဒေါ): Tuesday, August 24
ထိုင်းနိင်ငံမှာ ဒီကလေးမပျောက်နေတယ်။ ၀ိုင်းဝန် ကူညီ ရှာဖွေပေးကြပါ။ တွေ့ ရင်ပြောကြပါ။
ထိုဓာတ်ပုံပါ အသက် ၁၄ နှစ် မိန်းကလေးအားတွေ့ရှိပါက
ဆက်သွယ်ရန် ...ဒေါ်နန်းစံယု- 095114816 , 098611870
မှတ်ချက်... သတင်းပေးသူအား ထိုက်တန်စွာကျေးဇူးဆပ်ပါမည်။ညီမလေး ခင်ခင်ဝင်းလှိုင် (ခ) မိုးစက်ငယ် ရောက်ရာအရပ်ကအမြန်ပြန်လာပါမမကြီးနှင့် မေမေကြီးစောင့်နေတယ် ။
BY YeYint Nge ... 8/24/20100comment Links to this post
24 August 2010 ဒိုင်ယာရီ
24 August 2010 Yeyintnge's Diary
မောင်အောင်ထက် | အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ပဉ္စလက် ဂဏန်းများ
ရဲနည် Tuesday, August 24, 2010 သူ့အတွေး သူ့အမြင်
နောက်ဆုံး မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ တယောက် အများမျှော်လင့် စောင့်ဆိုင်း နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နေ့ကို နိုဝင်ဘာ လ ၇ ရက် အဖြစ် ရွေးချယ် သတ်မှတ် လိုက်ပါပြီ။ အသက်အရွယ် အိုမင်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အာဏာရှင်ကြီးက သူ့ရဲ့လုပ်ကြံ ဇာတ်ထုပ် အတိုင်း ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ အရာရာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအမြဲတစေ အားကိုး အားထား ပြုလေ့ရှိတဲ့ ဗေဒင် ဆရာတွေရဲ့အကြံဉာဏ် မပါဘဲနဲ့ ဒီလို သတ်မှတ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
တကယ်တော့လည်း ဒီအစဉ်အလာက အသစ်အဆန်းရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည် သက်ဝင်တဲ့ နိုင်ငံတခုလို့ အများက သိကြပေမယ့် ဗေဒင် လက္ခဏာ၊ ဂမ္ဘီရ၊ ဂဏန်းတွက်ကိန်း၊ အောက်လမ်း အထက်လမ်း နဲ့ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ အလေ့အထ ယုံကြည်သူတွေကို မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအလွှာတိုင်းမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးလက် အရပ်သားတွေကနေ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအထိ အဲ့ဒီ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိနေကြတာပါ။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝ ချမ်းသာလာဖို့၊ အောင်မြင်မှုတွေ ရလာဖို့နဲ့ ကြမ္မာဆိုးတွေ မောင်းထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေနဲ့ ဗေဒင် ဆရာတွေထံမှာ သူတို့ အကြံဉာဏ် တောင်းယူ တတ်ကြပါတယ်။
ခေတ်သစ်မြန်မာ့သမိုင်းမှာလည်း နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူတွေက အတိတ်နိမိတ်ကောင်းမယ့် နေ့ရက်၊ အချိန်နဲ့ အမည် သတ်မှတ် တိုင်းမှာ ရှေ့ဖြစ်ဟောဆရာတွေဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းယူလေ့ရှိပါတယ်။ ငွေစက္ကူ ထုတ်တာကအစ သူတို့ ပါဝင် ပတ်သက် ကြပါတယ်။
ဥပမာ တချို့ပြရရင် ဗြိတိသျှဆီက လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့တဲ့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို တရားဝင် ကြေညာတာတောင်မှပဲ ဗေဒင် ဆရာတွေရဲ့ ဟောကိန်းအတိအကျအတိုင်း ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် မနက်လင်းအားကြီး ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ တိတိ မှာ ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၇ မှာ ကွယ်လွန်သူ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းက ၄၅ ကျပ်တန် နဲ့ ၉၀ ကျပ် တန်တွေ ထုတ်ခဲ့တုန်းကလည်း နံပါတ်တွက်ကိန်းအရ ၉ ဂဏန်းဟာ သြဇာရှိတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဂဏန်းနှစ်ခုပေါင်း ရင် ၉ ဖြစ်မယ့် (၄+၅=၉ ၊ ၉+၀=၉)ငွေ စက္ကူတွေကို ယတြာ သဘောနဲ့ ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကလည်း သူ့ ရှေ့ကဆရာကြီးတွေ လုပ်ခဲ့သလိုပဲ လုပ်ငန်းတွေကို ကွပ်ကဲ စီမံရာမှာ ဗေဒင် ဆရာ တွေရဲ့ အကြံဉာဏ်ကို သုံးပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က တိုင်းပြည်ရဲ့ အစိုးရရုံးစိုက်ရာ မြို့တော်ကို ရန်ကုန်ကနေ နေပြည်တော် ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာလည်း ဗေဒက၀ိ အကျော်တွေရဲ့အကြံပြုချက်နဲ့ပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဂဏန်းက နံပါတ် ၁၁ ပါ။ သူ့အစိုးရကို ဒုက္ခ ၁၁ မီး ငြိမ်းရမယ်လို့ ဗေဒင် ဆရာတွေက အကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာသာရေးမှာ အဲ့ဒီ ၁၁ မီးကို ရာဂမီး (လောဘမီး)၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီး၊ ဇာတိမီး၊ ဇရာမီး၊ မရဏမီး၊ သောကမီး၊ ပရိဒေ၀မီး၊ ဒုက္ခမီး၊ ဒါမနဿမီးနဲ့ ဥပါယာသ မီးတွေလို့ ဆို ထားပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တွေကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် (၆ + ၅=၁၁) ချမှတ်တာလည်း အဲ့ဒီ ၁၁ ဂဏန်းကြောင့်ပဲလို့ ယူဆရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့် နိုဝင်ဘာလဆိုတာလည်း နှစ်တနှစ်ရဲ့ ၁၁ လမြောက် လ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဂျင်မ် ၀က်ဘ်နဲ့ ဂျပန်သတင်းစာ အဆာဟိရှင်ဘွန်းက ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ လ ၁၀ ရက် (၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀) ရွေးကောက်ပွဲရက်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဘာကြောင့် ပယ်ချ ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လပ်ကီးနံပါတ် ၁၁ နဲ့ နမိတ်ကောင်းတဲ့ ၇ ဂဏန်း နှစ်ခုကို ရောသုံးထား တဲ့အပေါ်မှာ အခြေခံခဲ့ပုံရပါတယ်။ ၇ ဂဏန်းဆိုတာက သူနဲ့ သူ့အပေါင်းအပါ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တရက်မဟုတ် တရက်မှာ မွေးခဲ့မယ့် ရက်သတ္တပတ်မှာရှိတဲ့ နေ့အရေအတွက်လေ။ ၇ ရက် သားသမီးတွေ မဟုတ်လား။
ဆိုတော့ ၁၁ မီးကို နေပြည်တော်က ၇ ရက်သားသမီးတွေက ငြှိမ်းရမယ်ပေါ့။ ၁၁ နဲ့ ၇ ပေါင်းရင် ၁၈၊ ၁၈ ကို ၁ နဲ့ ၈ ခွဲပြီး ပေါင်းလိုက်ရင်လည်း(၁၁+၇=၁၈ ၊ ၁+၈=၉) လာပါပြီဗျ ၉ ဂဏန်း။
ပြည်ပက မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေကြားမှာတော့ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ အဲ့ဒီ ဂဏန်းတွေကို လှောင်ပြောင် အဓိပ္ပာယ်ဖေါ်နေကြလေရဲ့။ ၇ - ၁၁ ဆိုတာ ၂၄ နာရီပတ်လုံး လိုတဲ့အချိန် ဈေးဝယ်လို့ရတဲ့ (ဆဲဗင်းအလဲဗင်း) စတိုးပါတဲ့။
သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးဟာသ အဆိုအရ နေပြည်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေကို မဲဆန္ဒ ရှင် ပြည်သူတွေက နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ မဖြစ်မနေ ၀ယ်ယူရတော့မှာပါတဲ့။ “၂၄ နာရီပတ်လုံး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု တွေ ပေးမယ့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပါပဲ။ ဒုက္ခရောက်ဖို့သာ ပြင်ပေတော့"လို့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတဦးက ပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက်ကတော့ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကနေ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးထွက်လာမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတွက်ချက် ဖို့ ဗေဒင်ဆရာတွေ မလိုပါတော့ဘူး။ မဲ လိမ်ကွက်တွေ၊ ခြယ်လှယ်မှုတွေ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး လို့ ခေါ်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ ရဲ့ လက်ဝါး ကြီး အုပ်မှုတွေက သူ့ရဲ့အောင်ပွဲကို ၉၉ ဒါမှမဟုတ် ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း(၉+၂=၁၁) အာမခံပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေမှာ မလွဲပါ။ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲတုန်းကလည်း သူ အဲ့ဒီလိုပဲ လံကြုတ် လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်လား။
Than Shwe Juggles the Numbers in Choosing Election Date by Yeni ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆို ဖော်ပြသည်။
“စလှယ်ဝင် ဒီမိုကရေစီအိုးနဲ့ ချက်ပွတ်ပွဲတော်”
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က လေဆိပ်မှာ ယာဉ်နောက်လိုက်လုပ်ရင်း ကျောင်းသားဘဝငွေရှာခဲ့ရတဲ့ အချိန်တချိန် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ လေဆိပ်မှာလေယဉ်ဆင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ ခရီးသည်အထွက်လမ်းမှာ ကားသမားတွေ၊ ကားသ မားနောက်လိုက်တွေက စီတန်းရပ်နေပြီး ထွက်လာသမျှ ခရီးသည်ကို မြူဆွယ်ခေါ်ငင်ရတာပါ။ လေယဉ်စီး ပြန်လာတဲ့ ခရီးသည်မို့ ကားကောင်း၊ ကားသန့်မှ စီးချင်သလို အဲကွန်းပါတဲ့ကားလေးမှ ကားထင်ပါတယ်။ ထား ပါ၊ အခုပြောချင်တာက အဲဒီအငှားကားသမားနောက်လိုက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝကိုမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကြား နာ မှတ်သားခဲ့ရတဲ့ စီနီယာအငှားကားမောင်းဆရာကြီးတွေ ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ပုံတိုပတ်စ၊ ဟာသတွေ အထဲ က Dirty Joke လို့ ခေါ်ရမယ့် ဟာသတစ်ခုပါ။ ဒီဟာသလေးကို လောဘတကြီးနဲ့ အလွယ်လမ်းလိုက်၊ သူများရဲ့စီနီယာအလိုက်စီထားတဲ့ အော်ဒါကို ကျော်ခွပြီး ခရီးသည်လုတဲ့ သူမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဟာသလေး ကဒီလို- တခါက အလွန်ချမ်းသာတဲ့ မုဆိုးဖိုသူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဆီကို ဇနီးချောချောလေးပိုင်ထားတဲ့ ကားသ မားတစ် ယောက်က ဒရိုင်ဘာသွားလုပ်မိပါသတဲ့။ သူဌေးကြီးက သူ့ဒရိုင်ဘာရဲ့ ဇနီးချောလေးကို စမြင်မြင်ချင်း တည်းက မက်မောသဘောကျမိသတဲ့။ စားနေကျ ကြောင်းဖားကြီး မုဆိုးဖိုဖြစ်သွားတော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း လည်တယ်။ သူများမယားလည်းဖြစ်၊ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းရဲ့ဇနီးမယားလည်းဖြစ်တော့ သွားကြံလို့ အလို မတူရင် ပြသနာကြီးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကစ်ကစ်ကျစ်ကျစ် လှတ၊ ပတလေးကိုလည်း မကြာခဏ မြင်နေရ တော့ ဘယ်လိုမှလည်း ဖြေမပြေဘူး။ တနေ့တခြား သူများမယားကို ကြာခိုဖို့သာ တဏှာတွေနဲ့ စိုလူးနေ လေ တော့တယ်..။
ဒါနဲ့တနေ့တော့ အကြံတစ်ခုရပြီး သူ့ဒရိုင်ဘာကိုခေါ်ပြီး သူနဲ့ညအတူအိပ်ဖို့ မိန်းမတစ်ယောက် သွားရှာခိုင်း တယ်။ ဘယ်လောက်တောင်းတောင်း ဈေးမဆစ်နဲ့ လှတာမလှတာလည်း မင်းအလုပ်မဟုတ်ဘူး ခေါ်သာခေါ်ခဲ့ ဆိုပြီး ထွက်ရှာခိုင်းသတဲ့။ သူဌေးခိုင်းတာဆိုတော မလုပ်ချင်လဲ လုပ်ရတာပေါ့။ ဒါနဲ့ဘဲ မိန်းမပျက် ညည့်ငှက်မ လေးတစ်ယောက် ရှာခေါ်ခဲ့လိုက်တယ်။ ဟိုကလည်း အသည်းအသန်လိုချင်နေမှန်းသိတော့ ဒရိုင်ဘာလေးရဲ့ တလစာလောက်မကတဲ့ ညကြေးတောင်းတယ်။ သူဌေးကဈေးမဆစ်နဲ့ဆိုတော့ မဆစ်ဘဲခေါ်လာပြီး သူဌေးနဲ့ တွေ့ ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ပြန်ပို့ပေးဖို့လည်း သူဌေးကသူ့ကို တာဝန်ပေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကိစ္စပြီးလောက်တဲ့ အချိန် လည်းကျရော ကောင်မလေးကပုံစံမပျက် လေလေးတောင်ချွန်ပြီးထွက်လာသတဲ့၊ လမ်းကျတော့ ကားသမားပါး စပ်ကိုမေးတာပေါ့ အခြေအနေဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ မိန်းမပျက်ကောင်မလေးက ရှင့်ဆရာက ပန်းသေနေတာ ထင်တယ်။ ကျမကိုခေါ်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးချွတ်၊ ပြီးတော့ ချက်ကလေးကို ပွတ်ပြီး တော်တော်ကြာတော့ ပြန်လွှတ် လိုက်တာဘဲတဲ့၊ လူကိုလည်းသေချာမကြည့်ဘူး အခန်းထဲမှာ စကားလည်းမပြော လူကိုလည်းသေချာမကြည့် ချက်လေးကိုလက်နဲ့ပွတ်ပြီးပြန်လွှတ်တယ်ဆိုပြီး ရယ်ရယ်မောမောပြောတယ်။ နောက်မနက်ဖြန်လည်း ချိန်းထား သေးတယ်။ ပြီးတော့ဘောက်ဆူးပါ ထပ်ပေးလိုက်သေးတယ်တဲ့။
ကားသမားဘဲ။ ဒီစကားလောက်နဲ့ ဘယ်ယုံမလဲ။ သူဆရာ အဲလောက်ညံ့မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပေါ့။ နောက်ညတွေကြတော့ သူက ချောင်းပါလေရော။ အဲတော့ သူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းက မိန်းမပျက်ကောင်မလေး ပြောတဲ့အတိုင်းဘဲ ကောင်မလေးကို မျက်နှာတောင်သေသေချာချာမကြည့်ဘဲ တစ်ကိုယ်လုံးကအဝတ်တွေ ချွတ်၊ ချက်ကလေးကို လက်နဲ့ပွတ် တော်တော်လေးကြာတော့ ဘောက်ဆူးထပ်ပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်လုပ် တယ်တဲ့။ ကားသမားက လည်းတစ်ညတော့ဖြစ်နိုးဖြစ်နိုးနဲ့ ညတိုင်းချောင်း၊ သူ့သူဌေးကလည်း ညတိုင်းအဲလိုဘဲ လုပ်ပြီးပြန်ပြန်လွှတ်တယ်။ တစ်လလောက်ကြာတော့ ကားသမားလေးက တွေးတယ် အင်း ငါတစ်လလုံး ပင်ပင် ပန်းပန်းနဲ့ ဘဝကို ထောင်နုတ်ခမ်း နင်းပြီး ကားသမားလုပ်စားတဲ့ လစာကို သူက ချက်ကလေးလက်နဲ့ အပွတ်ခံ ပြီးရရလာတယ်။ ဒီလို လွယ်လွယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံမျိုကို သူဠေးဆီက ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးပါ တွေး လာတယ်။ အကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုအနေနဲ့ အဲဒီနေရာမှာ ငါ့မိန်းမကိုနည်းနည်းရုပ်ဖျက်ပြီး လွှတ်လိုက်ရင် လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ဒီပိုက်ဆံရမှာလို့ လောဘဇောကပ်တွေးတယ်။ ပထမတော့ ဒီလိုတွေးရတာ တောင် အကု သိုလ် လို့ထင်တယ်။ ငွေတွေကလည်း အလကားနီးပါးမိန်းမပျက်လေးဆီ ညတိုင်းပါပါသွားတော့ အတွေးစက လက်တွေ့ဘက် ကို ကူးချင်ချင်ဖြစ်လာတယ်။
အဲဒါနဲ့ အဲဒီအတွေးကို မိန်းမကိုဖွင့်ပြောပြတယ်။ ရလာမယ့်အကျိုးအမြတ်ကိုလည်း ပြောပြတယ်။ ပထမတော့ မိန်းမကလည်း စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးအကြောက်ကန်ညင်းတယ်။ နောက်တော့ မိန်းမယုံအောင်ဆိုပြီး သူ့သူဌေးမုဆိုး ဖိုရဲ့ ချက်ပွတ်ပွဲကို လက်တွေ့ခိုးပြတယ်။ အဲတော့ တခါကနှစ်ခါပြော၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ချက်ပွတ်ပွတ်ပြီးပြန် လွှတ်လိုက်တာကိုတွေ့တွေ့လာတော့ တလလုံး ယောက်ျားလုပ်သူရဲ့ ဒရိုင်ဘာလစာလေးနဲ့ ဆင်းဆင်းရဲရဲ၊ ခြိုး ခြိုးခြံနေတာထက်စာရင် ရုပ်လေးဖျက်ပြီး ချက်သွားအပွတ်ခံနေလိုက်ရင် ကိုယ့်လည်းဘယ်သူမှမသိ၊ သူဌေးက လည်းမသိဘဲ ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မယ်ဆို တာမျိုးလေးအတွေးပေါ်လာပြီး ယောင်္ကျားရဲ့ အကြံကိုလက်ခံ လိုက်တယ်။
အဲဒါနဲ့ ညလည်းရောက်ရော ရုပ်လေးနည်းနည်းဖျက်လို့ မိန်းမပျက်လေးယောင်ဆောင်ပြီး ချက်ပွတ်ခံဖို့သွားသ တဲ့၊ ယောင်္ကျားဖြစ်သူကလည်း သူ့သူဌေးချက်ပွတ်သမားရဲ့ ပိုက်ဆံကို မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေးရတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်ချလက်ချကို အခန်းထဲပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီအခြေအနေကို ခွင်ဆင်ပြီးစောင့်နေတဲ့ သူ့သူဌေးကတော့ သူ့ကား ဒရိုင်ဘာလေးရဲ့ ဇနီးချောလေး သူ့ခွင်ထဲဝင်လာတာလည်းသိရော၊ အခန်းတံခါးသေချာပိတ်၊ ယောင်္ကျားအား တွေဘာတွေပါ စားပြီး အားရပါးရလွှတ်သွားလိုက်တာများ မိန်းမခမျာလည်း ငယ်သံပါ။ ဒရိုင်ဘာယောင်္ကျားခမျာ လည်း အခန်းပြင်ကနေ ဘာမှမလုပ်သာ သူကိုယ်တိုင်ထည့်လိုက်တာကိုး။ မနက်လင်းအားကြီးလို့ စားနေကျ ကြောင် ဖားသူဌေးက စိတ်ကျေနပ်တော့မှ တစ်ညခငွေလေးလက်ထည့်ထည့်ပေး ပြီးပြန်လွှတ်လိုက်သတဲ့….။
အမှန်တော့ ဒီDirty Joke ကို အချင်းချင်းဆီက ကားအော်ဒါကို၊ ခရီးသည်(ပါစင်ဂျာ)ကို ခွင်ကျော်ယူသွားပြီးခါမှ ညစ်ပတ်၊ ဈေးဆစ်လွန်းတဲ့ ခရီးသည်၊ လမ်းကြိုလမ်းကြားနဲ့ ပြန်ထွက်ရခက်တဲ့ အိမ်အထိ ငှားသွားတတ်တဲ့ ခရီး သည်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှ မသက်မသာပြန်လာတတ်တဲ့ ကားသမားကို ကျန်တဲ့သူတွေက ပြောတတ်တဲ့ “နောက်မှ ချက်ပွတ်တာမဟုတ်ဘဲ။ ရှင်ကြိး တကယ်လုပ်တယ် မပြောနဲ့နော်”ဆိုတဲ့ စကားချီးနဲ့ ပြောဆို စကားနာထိုးတဲ့ အခါမှာ သုံးတဲ့ ညစ်တီးညစ်စုတ်ဟာသလေးပါ။
ဒါပေမယ့် လေးငါးနှစ်ဆယ်နှစ်ကျော်လာတဲ့ အခုအချိန်ခါမှာ ဒီပုံပြင်လေးကို ထင်ထင်လင်းလင်းလေး ကျွန်တော့် အာရုံထဲ ပြန်ပေါ်လာမိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အသံတွေညံလာနေ တုန်းမှာ ကျွန်တော်မြင်မိတဲ့ ပညာရှင်တစ်ဖြစ်လဲ တတိယအုပ်စု သို့မဟုတ် (ဟာသလေးထဲက ကားဒရိုင်ဘာလို လူ)နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသစ် ကစားချင်သူလူတန်းစားတစ်စုနဲ့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘဲ ဆိုခဲ့ပါ ကားဒရိုင်ဘာ လို ပညာရှင်တစ်စုအဟောအပြောနဲ့ ယုံယုံကြည် ဘဝရင်းဝင်ပြီး အခွင့်အရေးတစ်ခုခုမျှော်ပြီး ဝင်ခူးဆွတ်ချင် နေ ရှာတဲ့ ပါတီသစ် လူငယ်မျိုးဆက်၊ လူကြီးပိုးတက် ကားဒရိုင်ဘာရဲ့ဇနီးချောလိုလူတွေရဲ့ “တိုင်းပြည်အတွက် လုပ် တာပါ”ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ စစ်အစိုးရလို စားနေကြကြောင်ဖားမုဆိုးဖို သူဌေးလိုလူမျာရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် အပြိုင်ကျဲနေကြတဲ့ အာဏာရှင်တဖြစ်လဲ ဒီမိုကရေစီ ချက်ပွတ်ပွဲမှာ ဘယ်သူငယ်သံပါအောင်အော်ပြီးခံရမလဲ။ ဘယ် သူ မခံချိမခံသာ ပြည်တည်နေမလဲဆိုတာကို ဒီပုံပြင်လေးကိုတွေးလိုက် ရင်မောလိုက်ဖြစ်နေမိပါရဲ့။
အဲဒီသုံးပွင့်ဆိုင် လူတတ်၊ လူယောင်၊ လူယုတ်တို့ ၂၀၁၀ အခင်းအကျင်းသစ်ခေါင်းစဉ်လေးတပ်ပြီးတော့ ရက်က လေးပင် သတ်မှတ်ပြီး မီးတပြင်ပြင်၊ ဆိုင်းတကြွကြွ ဖြစ်လာသဖြင့် မိုးတစွတ်စွတ်၊ ဗွက်တဖွတ်ဖွတ်လမ်းမတွေ ပေါ်မှာ ဒီဟာသပုံပြင်လေးနဲ့ ယှဉ်တွဲတွေးပြုံးသက်ပြင်းချချနေမိလို့ ဒီစာလေးကိုကောက်ရေးချလိုက်မိပါရဲ့…။
တဆက်တည်းပြော ချင်မိလိုက်တာက နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်လုပ်တာပါဆိုတဲ့ မိန်းမချောပါတီ သစ်တွေခ မျာမလဲ။ တစ်ညစာချက်ပွတ်ခလို အလွယ်အချောင် အခွင့်အ ရေးမျိုးလေးရမလားလို့ “နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက်လုပ်တာပါဆိုတဲ့” ခေါင်းစဉ် လေးရွေးပြီး ဝင်ကကြရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲသာဖင်နားကပ်လာတယ်။ ချခံရမှာလား၊ ကုန်းစုပ်ရမှာလား မဝေခွဲနိုင် သေး တဲ့အပြင် နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအကျိုးမပြောနဲ့ ကိုယ့်ပါတီအရေးအတွက်ပင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်စည်းရုံးဟောပြော ခွင့် ပင်မရသေးပေ။ အဲလို ကိုယ့်ပါတီရဲ့ အဓိကဖောင်ဒေးရှင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုစည်းရုံးခွင့်ကိုပင် သူတောင်းစားတောင်းသလို ဗိုလ်မှူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီး များဦး စီးထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံမှ တောင်းခံလို့မရသေးဘဲနဲ့များ “နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး အကျိုး အတွက်ပါ”ဆိုတဲ့ စကားကို မရှက်မကြောက် ထွက်ဟောက်ရဲတာကို အံ့နေမိတယ်။
ဒါပြင် ဒါ့ပြင် ယောက်မလိုငမွှေ ပညာတတ် စပေ့ချဲ့သမားကြီးများမလဲ သူတို့ဆင်တဲ့ဂွင်နည်းနည်းလူရာဝင် လာ ပြီ အထင်နဲ့ ဂျာနယ်အစာကျယ်လိုက်တာ ဘဘဘုရားအမြတ်တော်ရှလို့ ထွက်တော်မလှ သုံးပတ်လောက်ပိတ် လိုက်တော့ ခြေသုတ်ပုဆိုးမြွေစွယ်ကြိုးနှယ် အသံပြန်တိန်သွားရှာပြီး ဒုံရင်းထုံးစံ မဝင်ပြန်သူတွေ၊ လက်မခံသူ တွေကိုဘဲ၊ မိမိရနေရှာတဲ့စပေ့လေးကနေ သခင်အားရကျွန်ပါးဝ ထထဆဲပေးနေခြင်းနဲ့ဘဲ သူတို့ဇာတ်ဝင်ခန်းကို သူတို့ဖာသာလှသွေးချယ် နေရလေရဲ့…။
မြန်မာနိုင်ငံလို ပထဝီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျပ်၊ လူမျိုးစုအခြေခံနိုင်ငံရေး အကျဉ်းအကျပ်ရှိနေသောနိုင်ငံမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ ဦးဆောင်ခွင့်ရနေသော၊ Democracy Transition တစ်ခုရဲ့ အဓိကအခန်းကဏ္ဏမှာ ဝင်ပါသူ များအနေနဲ့ အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ဆင်အဝှာခွေးမျှော်သလို မစားရဝခမန်း အနှစ်သာရမဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမယုံကြည်ဘဲနဲ့ ပြည်သူကို လက်ခံယုံကြည့်ဖို့ အဆိပ်ခပ်နေတာဟာ ပညာတတ်လူကြီးလူကောင်းများဟု လက်ခံရမှာပင် ခပ်ရွံရွံဖြစ်မိပေ သည်။ စစ်မှန်သော Democracy Transition တစ်ခုအဖြစ်သွားချင်တယ်ဆိုလျှင် ဝင်သူကိုထောက်ခံရမှာဖြစ်သ လို၊ မဝင်သူကိုလည်း လက်ခံပေးရမှာဖြစ်သည်။
၄င်းအပြင် နှစ်ပေါင်းဆယ်ဂဏန်းနှင့်ချီ အမျိုးအမျိုးအလီလီ နာကျင် ခံစားခဲ့ရရှာသော တိုင်းရင်းသားများ၊ ပြည် သူလူထုများခမျာ ဖြေရှင်းချက်၊ ညှိနှိုင်းချက်၊ တောင်းပန်ခံဝန် ချက်တစ်တစ်ခုခုပင် မမျှော်လင့်နိုင်သေးခင် နောက်တစ်ကြိမ် အိမ်အဝမှာ ရယကလူကြီးက အိမ်ထောင်စုစာရင်း လာကောက်တာနှင့်ကြုံနေပြီ။ ဘာမှန်းညာ မှန်း သူတို့ခမျာမသိရှာသေး။ ဘုမသိ၊ ဘမသိ၊ မကျေမနပ်နှင့် ဘာကောင်မှန်း၊ ဘာလုပ်မယ်မှန်းမသိတဲ့ တစ်စုံ တစ်ယောက် နာမည်ရေးပေးလိုက်ရဖို့၊ လက်ဗွေနှိပ်ပေး လိုက်ရဖို့၊ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ရဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေရ ရှာပြန်ပြီ။ ဒါကို ဒီမို ကရေစီဟု အူရင်တော့ အဲဒါကို မယူပါရစေနဲ့တော့။ ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ပါ။ ဝင်သူနဲ့မဝင်သူ၊ ထောက်ခံသူနဲ့ မထောက်ခံသူ ဘယ်သူဟာ သမိုင်းတာဝန်ကျေသလဲ ဆိုတာကို သမိုင်းစရှည်ရှည်စောင့်နေစရာ မလိုဘဲ အဖြေကထွက်နေပြီ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သတ်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ လော်ဆော်နေသော၊ ဝင်ရန်ပြူတစ်ပြူတစ်စောင့်နေ ကြသော ဆရာကြီး၊ ငယ်၊ လတ်၊ ဆိုဒ်စုံများသို့ မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါသည်။ ဘာလို့များ မဲမပေးခြင်း၊ ရွေး ကောက်ပွဲမဝင်ခြင်းသည်လည်း စပေ့ကိုချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မတွေးမိ၊ မတွေးရဲကြတါလဲ။ မပြောကြ။ မဟော ကြတာလဲ..ဆိုသည့်မေးခွန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဟာကွာ ငါတို့ဘာသာဝင်ချင်လို့ ဝင်တာကွာ ဘာဖြစ်လဲဟု ဖြေ ချင်လျှင်လည်း ဖြေခွင့်ပေးပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်ဘက်က တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဒီ ဆောင်းပါးလေးပေါ်မှ တောင်းဆိုချင်တာက တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာပါဆိုတာကို မ သုံးကြရန် ကန့်ကွက်လိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော့်တူလေးတွေ သုံးလေးနှစ်သားလောက်က နာမည်ကြီးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သူတို့အော်အော်ဆိုတာ ကြားဖူးပါသည်။ “အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ လွယ်လွယ် နဲ့လည်း မပျောက်နိုင် အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ”..အဆိုတော် လာဇယုရဲ့သီချင်း ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အဲဒီသီချင်းကို ပတ်ဝန်းကျင်က ဖွင့်ပါများတော့ ကျွန်တော့် တူတော် မောင်နှစ်ယောက်က ကလေးနားနဲ့ ကြားပြီးသူတိုပြန်ပြန်အော်ဆိုတာက “ကွဲကွဲလေးရော ရွယ်ရွယ်နဲ့ယဲ မ ပြောက်နိုင် ကွဲကွဲလေးရောဂါ”တဲ့…အခုလည်း ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ ဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါက်ကရတွေကို ကျွန်တော့် တူလေးတွေဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ကွဲကွဲလေးရောဂါဆိုတဲ့ အသံမျိုးနဲ့ဆိုရင်း ဒီမိုကရေစီစလယ်ဝင်အိုးကြီးခမျာ ဖင်မည်းဖို့နေနေသာသာ ပါကင်ပင် မဖောက်ရသေးခင် ကွဲနေပြဲနေသူတွေအကြောင်းကို ပြုံးစစယှဉ်တွေး မိရင်း ကို ဒီဆောင်းပါးကို ဆက်ရေးရမလား ၊ ရပ်ပစ်လိုက်ရမလား တွေးနေမိပါတယ်။
(တနင်္လာ) ၂၃၊ ၈၊ ၂၀၁၀
Call Canada to Support 'Commission of Inquiry' on Burma
Canadian Parliamentaries supporting for UN 'Commission of Inquiry' on Human Rights sitaution in Burma
-compiled as of Aug 18, 2010 by Parliamenatary Friends of Burma (PFOB) and Canadian Friends of Burma (CFOB)
York South - Weston, ON
Brossard-La Prairie, Quebec
Moncton-Riverview-Dieppe, New Brunswick
Thunder Bay - Superior North, ON
Scarborough - Rouge River, ON
Terrebonne - Blainville, Quebec
La Pointe-de-l'Île/Foreign Affairs Critic (Bloc Québécois), Quebec
Leader of Bloc Québécois, Quebec
Toronto Centre/Foreign Affairs Critic (Liberal Party), ON
Yukon/Chair of PFOB, Yuko
Beaches - East York, ON
Minister of State for Foreign Affairs (Americas), Thornhill, ON
Malapeque, Prince Eward Inland
Toronto-Danforth/Leader of NDP, ON
Nanaimo - Cowichan, BC
Random - Burin - St. George's, New Foundland
Crowfoot/Chair - Standing Committee on Foreign Affairs, AB
Ottawa Centre/Foreign Affairs Critic (NDP)/Vice-chair(PFOB), ON
Burnaby-New Westminster, BC
Sackville-Eastern Shore, Nova Scotia
Senator Consiglio Di Nino Vice-chair (PFOB)
Senator Michel Rivard
Newton -North Delta, BC
Le Ber, Quebec
BQ: Bloc Quebecois
We need to ask him to put it into action!
Please send an email message to the Foreign Minister Lawrence Cannon (Cannon.L@parl.gc.ca) and cce’d to Prime Minister Stephen Harper (Harper.S@parl.gc.ca), or call directly to his office (613-995-1851).
Please also urge your MPs and Senators to add into the list of parliamentary support on this inquiry. Just ask them to contact us to update the list.
Call Canada to Support 'Commission of Inquiry' on ...